Global Voices teny Malagasy » Ny Tanambokovoko Swastikas Sy Vetaveta, Na: Ny Fomba Nianaran’ny Polisy Rosiana Tsy Ho Be Fanahiana Sy Hitia Mamoritra Ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Aogositra 2016 2:31 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika imanoela fifaliana
“Ny Efitrano Fiadiana” tranga avy ao anatin'ilay horonantsary “Dr. Strangelove” tamin'ny 1964 na: Ahoana No Nianarako Tsy Ho Be Fanahiana Sy Hitia ny Baomba.” Sary nataon'i Kevin Rothrock.
Tamin'ny Janoary 2016, rehefa notaterin'ny  tambajotram-baovao MediaZona fa nabontsin'ny mpitandro ny filaminana Rosiana ny antontan'isan-dry zareo momba heloka voavaha tamin'ny fanaovana ho lasibatra ireo tovolahy izay nizara sary vetaveta tety anaty tambajotra sosialy, sahala amin'ny hoe tsy mitovy tsara ny fitsinjaràn'ilay tena fototra sarobidin'ireo fepetra vaovao fifehezana ny aterineto ao Rosia ireo zavatra eo am-pelatànany ho famoretana eo amin'ny firenena. Saingy, ahitana ohatra iray tonga lafatra io olana io ankehitriny, ary tsy maintsy atrehany miaraka amin'ny zavatra hafa manelohelo mibahan-toerana ao an-tsain'ny Tranonkala : Nazis .
Tamin'ny volana lasa teo, nampangain'ny fitsaràna iray tao Rostov ho nanao fanararaotam-pahefana sy namorona porofo ny manamboninahitra iray avy amin'ny polisy. Araka ny voalazan'ny fitsaràna azy, nangataka tamin'ny lehilahy iray teo an-toerana antsoina hoe A. Minaev i D. Eliseev tamin'ny 16 Janoary 2015, nangataka azy mba hitady olona eo an-tanàna mety hanaiky hamoaka swastika iray eo amin'ny pejy Vkontakte-n'izy ireo, ny fanantenana dia ny mba hahakely kokoa ny sazy mihatra. (Tsy fantatra mazava izay vola tambiny nomen'i Eliseev ho takalony.) Nanana ny traikefany tamin'io karazan-javatra io i Minaev, taorian'ny fandoavany sazy in-droa miantaona ny taona talohan'io noho ny fizaràna “votoaty mahery fihetsika” tety anaty tambajotra, tao anatin'izany ireo sarinà swastikas.
Telo andro taty aoriana, nangataka tamin'i Minaev i Eliseev mba ho any amin'ny biraony, nilazàn'ilay mpitsongodia taminy fa efa niomana ny hanameloka azy ireo mpitandro filaminana noho ny famoahana lahatsary iray tamin'ny tambajotra izay lazaina fa mandika ireo làlana Rosiana manohitra ny fanaovana mahery fihetsika. Nampitandrina azy i Eliseev fa hofonjaina fara-fahakeliny 15 andro izy, raha tsy ohatra angaha ka manaiky fifanarahana hafahafa: mandefa swastika iray hafa amin'ny tambajotra ary manaiky handoa sazy 1.000 robla (15 dolara), izay nampanantenain'i Eliseev fa izy tenany no handoa azy. Rehefa nanaiky i Minaev, nalain'ilay mpitsongodia ny solosainan'ilay lehilahy, niditra tamin'ny pejy Vkontakte izy, namoaka sarinà swastika iray, ary naveriny taminy indray ilay solosaina avy eo. Rehefa vita izay, nanoratra tatitra iray ho an'ny polisy i Eliseev ary naka ny fanambaràna iray avy tamin'i Minaev, nanao vakiraoka ireo antontan-taratasy nasiana ny datin'andro manaraka.
Na izany aza, tsy azon'ilay mpitsongodia veroka fa noraketin'i Minaev tamin'ny alàlan'ny mikrô nafenina ilay fifanakalozana manontolo. Andro vitsivitsy taty aoriana, nandeha tao amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna teo amin'ny distrika i Minaev, izay fantany fa tsy namorona zavatra hamelezana azy mihitsy. Nandresy lahatra azy ireo mpampanoa lalàna nony avy eo mba hametraka fitoriana an'i Eliseev Mpitsongodia, ary dia an-dàlana nanomboka teo ny fanadihadiana iray vaovao mahakasika heloka bevava.
Tsy tampin-dàlan-kaleha anefa i Eliseev, tsy tara akory izy nandresy lahatra an'i Minaev mba hanaisotra ny fitoriany, miaraka amin'ny fanomezana vola kely. Nomeny mikrô kely iray mihintsy aza i Minaev, nangatahany mba handraisana feo ny tafatafa manaraka ataony miaraka amin'ireo mpampanoa lalàna. Teo am-pamaranana an'io seho mahatsikaiky feno hadisoana io, nolazain'i Minaev tamin'ireo mpampanoa lalàna ny momba ilay mikrô avy any amin'i Eliseev ary dia nomen'ny mpampanoa lalànan'ny distrika fitaovana iray hafa fandraisana feo izy (fahatelo amin'izay fitaovana eo am-pelatànan'i Minaev amin'izao fotoana izao), izay nampiasainy mba handraisana ny resaka farany nifanaovana tamin'ilay mpitsongo dia.
Araka ny voalazan'ny mpitsara, te-hahazo fisondrotana amin'ny asany sy hahazo tambin-karama amboniny i Eliseev tamin'ny alalan'ny fisandohana “asa fanarahana maso nandany fotoana be.” Na izany aza anefa, mijanona ho olona afaka ihany izy. Ny 17 Jona 2016, nanasazy roa taona sy telo volana an'i Eliseev mba ho fizahan-toetra ny fitsaram-paritra Rostov, avy eo nanome famotsoran-keloka ho azy teo noho eo ihany.
Lazain'ny Sova, masoivoho mpiaro zon'olombelona, izay manaraka karazana heloka vokatry ny fankahalàna, ho toy zavatra fanao ao Rosia ny fomba fijerin'i Eliseev Mpitsongodia manao polisin'ny fanovana mahery fihetsika. “Ireo manmpahefana mpampihatra lalàna eny an-kianja dia voalohany indrindra, liana amin'ny fanatsarana ireo fepetra manamaro isa ,” hoy ny voasoratr’ ilay vondrona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/01/84989/
 hoy ny voasoratr’: http://www.sova-center.ru/misuse/news/other-actions/2016/07/d34977/